Budada Magnesium L-threonate (778571-57-6) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Nootropics budada / Magnesium L-threonate budada
Rating: SKU: 778571-57-6. Category: Nootropics budada
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka qiyaasta budada Magnesium L-threonate (778571-57-6), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada Magnesium L-threonate waa mid ka mid ah cilladaha ugu weyn ee adduunka galbeedka casriga ah, taas oo si gaar ah dhib ugu ah ka qaybgalka macdanta ee ku saabsan tallaabooyinka enzymatic 300 ee jirka. Magnesium threonate waa mid ka mid ah noocyada ugu bioavailable ee magnesium iyo gaar ahaan hagaajinta heerarka magnesium ee maskaxda.
Fiidiyowga budada Magnesium L-threonate
Root Magnesium L-threonate Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Budada Magnesium L-threonate
Formula kelli: C8H14MgO10
Miisaankani waa: 294.49
Dhibcaha Biyaha: 648-651 ° C
Kaydinta Nabadgelyada: RM
Color: cad ama cad cad crystalline cad
Budada macdanta leh ee L-Magnesium L-threonate oo kor u qaadaya hawlaha maskaxda iyo kor u qaad dheeraad ah
Isticmaalka budada budada ah L-threonate
Qiyaasta magnesium threonate ee ku haboon waxay kudhowantahay 1-2 si ay u keento qadar ka badan magnesium elemental. Caddaynta intooda badani waxay tilmaamaysaa xajmiga mgmaanta xajmiga magnesium maalin kasta iyo saddexda tiiroonba waa mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan.
Digniin ku saabsan budada cagaaran ee Magnesium L-threonate
Neefsashada mindhicirka ee magnesium way kala duwan tahay iyadoo ku xiran hadba inta magnesium jidhku u baahan yahay, sidaa daraadeed ma jiraan saameyno badan oo la xidhiidha dhammaystirka. Haddii uu jiro magnesium aad u badan, jidhku wuxuu ku faafi doonaa oo kaliya inta uu u baahan yahay. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta xad-dhaafka ah waxay sababi kartaa caloolxumada caloosha iyo shuban-biyoodka. Ma jiraan wax saameyn ah oo la soo sheegay.
Cilmi baadhayaashu waxay soo jeedinayaan in budada Magnesium L-threonate ay kicin karaan beeraha maskaxda oo ay ka caawiyaan qof kasta inuu ku guuleysto oo uu sii wanaajiyo hawlaha garashada habboon ee heer kasta oo nolosha ah.
Nasiib wanaag, cilmi-baarayaasha MIT ayaa soo ogaaday in budada Magnesium-L-threonate ay awood u leedahay in ay sarreeyaan xaddiga magnesium maskaxdaada ay soo nuugi karto. Ma aha oo kaliya, cilmi baarayaashu waxay xuseen budada Magnesium L-threonate labadaba xasuusto labadaba muddada gaaban iyo muddada dheer
Daraasad horudhac ah oo lagu daabacay wargeyska ugu sareeya ee Neuron ee 2010, cilmi baarayaasha MIT ayaa baaray nooc kasta oo la heli karo oo ah magnesium supplementary ah oo lagu muujiyey qaab xayawaan ah Magnesium L-threonate budada-iyo kaliya Magnesium L-threonate budada - awood u leh inuu u gudbo maskaxda iyo kor u qaadaan heerarka magnesium. Marka ay tijaabadoodu tahay, kororka maskaxda magnesium maskaxeed waxay keentay faa'iidooyinka la arko ee tallaabooyinka muhiimka ah ee garashada.
Cilmi-baarista hore ee magnesium threonate waxaa sameeyey aqoonyahanno ku sugan UCLA, laakiin daraasaduhu waxay ku kordhiyeen faa'iidooyin badan. Mid ka mid ah faa'iidada weyn ee magnesium threonate waa in la nuugo. Marka la eego waxaa jira kala badh daraasad oo kala duwan magnesium, oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah oo aan si buuxda loo heli karin, tani waa sifo naadir ah oo faa'iido leh.
Marka magnesium uu ka gudbo xuddun dhiig-maskaxeed, wuxuu aadayaa shaqada kor u qaadista xasuusta xusuusta labadaba mudada dheer iyo gaaban. Sababtoo ah magnesium waxay ku lug leedahay enzymes oo si deg deg ah u xoojisa waddooyinka loo yaqaan "synaptic pathways" (xidhiidhada maskaxda), qalabyada macdanta ee ma aha oo kaliya sameynta xasuusto si dhakhso ah, laakiin sidoo kale waxay ku ilaalineysaa da 'wayn.
Faa'iido kale oo ka mid ah magnesium threonate waa tayada fiican ee hurdada. Sida laga soo xigtay daraasadda 2002 ee joornaalka Pharmacopathiatry, magnesium threonate wuxuu u qaabeeyaa qaar ka mid ah soo dejiyeyaasha iyo gudbinta loo yaqaan GABAergic iyo glutamatergic. Cilmi-baadhayaasha waxaa lagu cabiray baaritaano EEG oo maskaxda ku jira si ay u helaan magnesium threonate oo ku caawisa tayada hurdada.
Sababahaas oo kale, dad badan oo isticmaala magnesium threonate ayaa sidoo kale dareemaya wax yar oo aan walwal lahayn oo aan walwal ka ahayn marka laga reebo.
Magnesium L-threonate Pow Powder
Suuqgeynta Magnesium L-threonate Sale
Sida loo iibsado budada Magnesium L-threonate ee AASraw